တရုတ် Pi Pa Ye တိုင်းရင်းဆေး တရုတ်ဆေး Loquat အရွက် ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် စက်ရုံ |အကောင်းဆုံး
တရုတ်အမည် pi pa ye
အင်္ဂလိပ်အမည်- Loquat အရွက်
လက်တင်အမည်- Eriobotryae Folium
သတ်မှတ်ချက်- တစ်ကိုယ်လုံး၊ လှီးဖြတ်၊ ဇီဝမှုန့်၊ ထုတ်ယူမှုန့်
အဓိကလုပ်ဆောင်မှု - အဆုတ်ကိုရှင်းလင်းခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်းကိုသက်သာစေခြင်း၊ ဆိုးရွားသောတုံ့ပြန်မှုများကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်အော့အန်ခြင်းကိုရပ်တန့်ခြင်း။
လျှောက်လွှာ- ဆေး၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အစားအစာ၊ ဝိုင်၊ စသည်တို့။
ထုပ်ပိုးခြင်း: 1 ကီလိုဂရမ် / အိတ်၊ 20 ကီလိုဂရမ် / တစ်ပုံး၊ ဝယ်သူများတောင်းဆိုချက်အရ
Loquat အရွက်သည် တရုတ်တိုင်းရင်းဆေးအမည် ဖြစ်သည်။၎င်းသည် Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl ၏အရွက်ဖြစ်သည်။၎င်းသည် အဆုတ်ကို သန့်ရှင်းစေခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်းကို သက်သာစေခြင်း၊ ဆိုးရွားသော တုံ့ပြန်မှုကို လျှော့ချပေးပြီး အော့အန်ခြင်းကို ရပ်တန့်စေသည့် အာနိသင်ရှိသည်။ညွှန်ပြချက်များ- အဆုတ်အပူကြောင့် ချောင်းဆိုးခြင်း၊ အသက်ရှူကျပ်ခြင်း၊ အစာအိမ်အပူရှိန်ကြောင့် အန်ခြင်း၊အရွက်များသည် အလျား ၁၂-၃၀ စင်တီမီတာနှင့် အကျယ် ၃-၉ စင်တီမီတာရှိသည်။အဖျားသည် စူးရှသော၊ အောက်ခံပုံသဏ္ဍာန်၊ အနားသတ်အကွာအဝေးမှ ကျိုးတိုးကျဲကျဲဖြင့် အမြှေးပါး၊ အခြေတစ်ခုလုံး။အပေါ်မျက်နှာပြင်သည် မီးခိုးရောင်အစိမ်း၊ အဝါရောင် သို့မဟုတ် နီညိုညိုရောင်ဖြစ်ပြီး တောက်ပနေပြီး အောက်မျက်နှာပြင်သည် မီးခိုးရောင် သို့မဟုတ် အစိမ်းနုရောင်ရှိပြီး အဝါရောင်အမွေးများဖြင့် ထူထပ်စွာ ဖုံးအုပ်ထားသည်။ပင်မသွေးပြန်ကြောများသည် အောက်မျက်နှာပြင်တွင် ထင်ရှားစွာပေါ်လွင်ပြီး နှစ်ဘက်ရှိ သွေးပြန်ကြောများ ပိနေပါသည်။အညှာအလွန်တို၍ အညိုဝါရောင်ဆံပင်များဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသည်။အသားရေ ပြတ်သားပြီး ကွဲလွယ်ပါတယ်။အရသာက နည်းနည်းခါးတယ်။
အဆုတ်ကို သန့်ရှင်းစေခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်းကို သက်သာစေခြင်း၊ ဆိုးရွားသော တုံ့ပြန်မှုများကို လျှော့ချပေးပြီး အော့အန်ခြင်းကို ရပ်တန့်စေသည်။
1. Qi ပြောင်းပြန်လှန်ခြင်းကြောင့် အဆုတ်အပူနှင့် အသက်ရှူကျပ်ခြင်းကြောင့် ချောင်းဆိုးခြင်း- ခါးသီးခြင်းအရသာကို လျှော့ချနိုင်ပြီး အအေး၏သဘောသဘာဝကို ရှင်းထုတ်နိုင်ပြီး အဆုတ် qi ကိုလည်း လျှော့ချပေးနိုင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်ပါရှိသည်။
2. အစာအိမ်အပူရှိန်၊ အော့အန်ခြင်းနှင့် အသက်ရှူကျပ်ခြင်း- ဤထုတ်ကုန်သည် အစာအိမ်အပူကို ရှင်းထုတ်နိုင်ပြီး အစာအိမ် qi ကို လျှော့ချပေးပြီး အော့အန်ခြင်းနှင့် ကြို့ထိုးခြင်းကို ရပ်တန့်စေနိုင်သည်။
3. အနောက်တိုင်းဆေးပညာအရ စူးရှသောလည်ချောင်းနာ၊ လည်ချောင်းနာခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ ရင်ကျပ်ရောဂါ၊ ချောင်းဆိုးရင်ကျပ်ရောဂါ၊ ပြင်းထန်သောနှင့် နာတာရှည် gastritis၊ diaphragmatic spasm သည် အစာအိမ်မီးလောင်ခြင်းမှ သက်ဆိုင်ပါသည်။
1. Compendium of materia medica- "အစာအိမ်ကို ညီညွတ်စေခြင်း၊ Qi ကို လျှော့ချခြင်း၊ အပူရှင်းလင်းခြင်း၊ နွေရာသီ အပူဒဏ်ကို သက်သာစေခြင်း၊ beriberi ကုသခြင်း"" Loquat leaf၊ အဆုတ်နှင့် အစာအိမ်ရောဂါကို ကုသရာတွင် အများစုမှာ ၎င်း၏ အောက်နား Qi ၏ အလုပ်ဖြစ်သည်။Qi အောက်မှာ မီးကျလာပြီး သလိပ်က ချောမွေ့လာမယ်၊ လွန်တဲ့သူတွေက မလွန်ဆန်ကြဘူး၊ အော့အန်သူတွေ မအန်ကြဘူး၊ ရေငတ်တဲ့သူတွေက ရေငတ်မှာ မဟုတ်ဘူး၊ ချောင်းဆိုးရင် မချောင်းဘူး။ .““အစာအိမ်ရောဂါတွေအတွက် ဂျင်းရည်ကို အဖုံးအုပ်ဖို့ သုံးတယ်၊ အဆုတ်ရောဂါတွေအတွက် ပျားရည်ကို အဖုံးအုပ်ဖို့ သုံးတယ်။
2. Chongqing Tang ၏ စာစီစာကုံးအရ "အဆုတ်အတွင်းရှိ လေ၊ အပူ၊ အပူနှင့် ခြောက်သွေ့ခြင်း၏ ရောဂါဖြစ်စေသော အကြောင်းအရင်းများအားလုံးသည် ပျော့ပျောင်းသော ရွှေရောင်ကို ကာကွယ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သော်လည်း ပွဲတော်ကို ကုသရန်၊ မွှေးကြိုင်သော်လည်း ခြောက်သွေ့ခြင်းမဟုတ်ပေ။ စိုစွတ်မှု၊ ကပ်ရောဂါနှင့် အစာအိမ်အတွင်းရှိ အဆိပ်ဖြစ်စေသော အကြောင်းရင်းများကို သန့်စင်စေပြီး Zhongzhou သို့ရောက်ရှိရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။"သို့သော် ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ သည် ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့် သုတ်သင်ရှင်းလင်းခြင်းတွင် ၎င်း၏ ကြီးမားသော အောင်မြင်မှုများကြောင့် ၎င်းကို ၎င်းအောက်တွင် Qi ဖြင့် တီထွင်ခဲ့သည်။
ခံတွင်း - decoction, 5-10g ။ချောင်းဆိုးခြင်းကို သက်သာစေရန်အတွက် ကြော်ရန် သင့်တော်ပြီး အော့အန်ခြင်းကို ရပ်တန့်ရန်အတွက်လည်း နေထိုင်ရန် သင့်တော်ပါသည်။
ဆောင်းရာသီမှ လာမည့်နွေဦးပေါက်အထိ ပင်စည်နှင့် အရွက်များ ညှိုးနွမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ပန်းမဆွဲသည့်အခါ စုဆောင်းပြီး တူးကြသည်။
အညစ်အကြေးများနှင့် အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားပြီး ရေဖြင့်ဖြန်းပါ၊ လှီးပြီး ခြောက်အောင်ထားပါ။
ယခင်- Shen Qu ဆေးသည် ရိုးရာတရုတ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များဖြစ်သည်။
နောက်တစ်ခု: Ji Nei Jin ရိုးရာ တရုတ်ဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်းများ
Cang Er Zi ရိုးရာတရုတ်ဆေးဖက်ဝင်ပစ္စည်း...
Mu Tian Liao တရုတ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ Polygonum...
Ma Bian Cao လက်ကားသဘာဝဆေးဖက်ဝင်အပင်များ V...
Teng Huang တရုတ်ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ Garcinia cam...
Gua Lou Herbal Medicine Supplier Dried Trichosa...
medicine additive Chinese Herbal Medicine Herbal Medicine Organic Herbal Medicine Chinese Medicine Food Additive >